Ny fampandrosoana ankehitriny ny indostrian'ny lasitra fanaka
Miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny indostrian'ny bobongolo fanaka any Sina, ny fangatahana sy ny fangatahana vokatra bobongolo fanaka dia mitombo tsikelikely. Ary ity fitomboana ity dia nitondra tosika lehibe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny teknolojia indostrialy. Amin'ny fampandrosoana ho avy ny indostria, trano fandraisam-bahiny ...
Ahoana ny fomba hamoronana lasitra mangatsiaka kokoa amin'ny kalitao avo kokoa
1. Ny vidin'ny famolavolana sy ny famokarana isaky ny bobongolo Air Cooler dia tsy maintsy fintina ara-potoana: amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso mahomby amin'ny atrikasa, mifehy tsara ny fametahana ny filaminan'ny asa, amin'ny alàlan'ny famolavolana rafitra bobongolo marina, fanodinana ampahany amin'ny bobongolo mahomby ary ampahany marina aotra fanaraha-maso, ...
Ny mari-pana ambany dia ambany amin'ny bobongolo vovoka dia mety hiteraka tsy fahatomombanana
Na dia miditra ao amin'ny bobongolo Dustbin aza ny mitsonika dia tsy miova ny hafainganan'ny tsindrona ary miova ny tahan'ny fikorianany. Avo dia ambony ny tahan'ny fikorianan'ny rano rehefa miditra ao amin'ny faritra vavahady boaty misy ny vavahady, saingy manomboka mihena ny tahan'ny fikotrana aorian'ny fidirana amin'ny lavaka famolavolana, izany hoe ny dingana famenoana bobongolo. Miovaova ny t ...
Ahoana ny fomba fitantanana araka ny tokony ho izy ny firafitry ny fipetrahana eo ambonin'ny bobongolo
Ny teboka maizimaizina dia tsy miseho fotsiny amin'ny fisokafan'ny bobongodin'ny Seza, fa matetika koa aorian'ny famoronana ireo zoro maranitra ao amin'ilay lahatsoratra. Ohatra, ny zoro maranitra eo anelanelan'ny zavatra iray dia mazàna tena malama, fa be volondavenona sy marokoroko ao aoriany. Izany dia vokatry ny tahan'ny fandehanana be loatra sy ny fampidirana ...
Ny famolavolana ny bobongolo mangatsiaka kokoa dia mamaritra ny fironana hiady
Amin'ny ankapobeny, ny famolavolana ny Mould Cooler Air dia mamaritra ny fironana hilona. Sarotra ny manafoana io fironana io amin'ny fanovana ireo fepetra famolavolana. Farany, ny olana dia tsy maintsy vahana amin'ny famolavolana sy fanatsarana ny bobongolo mangatsiaka kokoa. Ity tranga ity dia vokatry ny fanarahana ...
Amin'ny alàlan'ny fitsapana mitohy amin'ny mpitsara ny kalitaon'ny bobongolo dustbin
Ho an'ny bobongolo Dustbin, ny hevi-dehibe dia ny asymmetrika (fiainana bobongolo sy kalitaon'ny siny maharitra) ary ny fahombiazan'ny famehezana (kalitaon'ny bubble), noho izany dia ilaina ny fahamendrehana fitaovana avo lenta. Ny iray amin'ireo dingana lehibe indrindra dia ny fifehezana kalitao, izay mety tsara raha toa ka manana kalitao feno ny mpamatsy ...
Mametraha fomba fanamboarana tonga lafatra ho an'ny bobongolo ilaina isan'andro
Ny fomba famoronana fomba fanamboarana tonga lafatra ho an'ny ampahany amin'ny bobongolo ilaina isan'andro ilaina dia miankina betsaka amin'ny famaritana ireo zavatra ilaina andavanandro ampiasaina. Io no fototry ny vokatra tsy tambo isaina. Ny fahamendrehan'ny ampahany amin'ny filàna isan'andro amin'ny fanodinana ny bobongolo, ...
Niverina niverina hiasa 2021
Niverina niverina hiasa 2021 lohataona sinoa ary niverina niasa izahay! Ny orinasan'i Heya dia mifantoka amin'ny famokarana lasitra plastika manana traikefa mihoatra ny 10 taona. Toy ny bobongolo ao an-trano, bobongolo amin'ny tsindrona ao an-dakozia, fitaovana bobongolo ao an-trano, indostria ary inj ...